/Blog/Dianabol , Ithala/Yonke Into Oyifunayo Ukuyazi Ngokwakheka Kwe-Dianabol Ukuthengiswa
ezaposwa ngomhla 12 / 27 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Dianabol, Ithala.
Ngaba ukhangele ukuphucula ubunzima bakho be-muscle, ukukhaba ukuqala okanye ukugcina inzuzo enkulu? I-Dianabol (methandrostenolone) ipowder kufuneka ibe yinto enkulu elandelayo. Fumana into ofuna ukuyazi malunga nale anabolic steroids, ukusetyenziswa, ukuphumelela, nendlela yokudlulela kwimiphumo emibi.
Ukuba unomzimba omkhulu, uya kuqonda umzabalazo wokufumana ubunzima besisipha. Ukubhalisa kwi-gym kunye nokwenza loo mi sebenzi enobunzima njengemigangatho ye-barbell okanye imiphunga ayinako ngokwaneleyo ukutsalisa imisipha yakho.
Ukusebenza ngaphandle kunenzuzo yezempilo, kodwa kufuna umonde omkhulu, ukuvumelana kunye nexesha. Ndiyathetha, awukwazi nje ukuvavanya iiveki, zihlolisise ngokwezibuko, kwaye ulindele ukubona izihlunu ezisisigxina. Nangona kunjalo, unokwenza ngokuhlakanipha ngokuxhasa ngokusebenza kwakho kunye ne-anabolic steroids evunyiweyo, ngokuqinisekileyo kuya kukwandisa imisipha yakho kwiintsuku ezisixhenxe.
Yintoni i-Dianabol (iMethandrostenolone) Ubuninzi?
Inkcazo ye-Dianabol Powder
Raw Dianabol yinkampani yamachiza kunye neCAS no. (I72-63-9), yeklasi yeC17 anabolic steroids. I-stterotic synthetic steroid ezuze ukuthandwa ngenxa ye-1950. Isilwayo sinceda kakhulu abagijimi kunye nabakhi bomzimba abafuna ukugcina imizimba yabo kunye nokuqinisa amandla abo ngexesha elifutshane.
I-Anabolic steroids yaziwa ngokuba yi-hepatoxic. Ukunciphisa esi siphumo, abaphuhlisi be-Dianabol bafake iqela le-methyl kwi-17th isikhundla sekhabhoni. I-bond-bond bond isongezelelwe kwiindawo zokuqala neyesibini zee-athomu ze-khabhoni ukwenzela ukunciphisa imiphumo echaphazelekayo kunye ne-androgenic njenge-acne okanye i-pattern bald.
Ngokungafani nezinye i-steroids, i-Dianabol protein powder ivumelekile kumazwe amaninzi. Nangona kunjalo, isilwanyana sisisigxina se-III esilawulwayo kwaye siya kufumaneka kuphela kwi-odokotela, ngakumbi eMelika
Nangemva kweMfazwe Yehlabathi II, amaMelika kunye neSoviet Union babehlala bekhuphisana kwaye bekhangelelanisa ukuba baphumelele kwiingcamango. Nangona bobabini babebandakanyekile kwimfazwe yangempela, babechukunyiswa ngokubetha phakathi kwezemidlalo kunye nokuhlola kwenyanga.
Phakathi kwe-1940 kunye ne-50, amaRussia alawula i-Olimpiki, ngenxa yemveliso ye testosterone abadlali ababeyisebenzisa. Nangona kunjalo, le mfihlelo yayiyiminyaka emfutshane xa i-US ke. Ugqirha oOlimpiki, uJohn Ziegler, wafumanisa inkohliso. Ngenjongo yokungena kwiSoviet Union, wadibanisa neCiba Pharmaceuticals ukuza nemveliso efanayo.
I-Dianabol (methandrostenolone) ipowder yaba khona ekupheleni kwe1950s. Kwakudume kakhulu phakathi kwe-1960 kunye ne-70 njengekhetho elikhethekileyo kwi-steroids yomzimba.
Ngokungafani nabaphambili, eli liyeza lalingumlomo wokuqala we-anabolic steroid kwimarike. Injongo yale nkunkuma yayiyi-side-step injecting law of steroids ngabadlali. Unempembelelo engaphantsi kwe-androgenic kwaye ifumaneka nge-odokotela kumazwe amaninzi. I-D-bol iyomelele kabini kune testosterone.
Isilinganiselo se-Anabolic 210 100 320
Androgenic 60 100 45
Iimpawu zeMichiza kunye nePhysical of Dianabol Powder
Igama lemveliso IMethandrostenolone
Igama leKhemikhali 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-enye
CAS akukho. 72-63-9
Inqaku lokuxuba (° C) 163 - 167
Isisindo somzimba 300.442 g / mol
Umzimba · Amanzi (9.7 mg / L kwi-25 ° C)
· I-Glacial acetic acid
ukusetyenziswa Iququzelela ukunyuka kobunzima bomzimba
Amagama amabhanki kunye neeRhwebo · Dianabol
Indlela yokuthenga i-Dianabol (methandrostenolone) I-Powder Online
Ukuthenga i-anabolic steroids kuxhomekeke kwizinto ezimbalwa. Indawo yakho inendima ebalulekileyo kuba ezinye iindawo ziye zabeka imingcipheko ekuthengeni, kwifa kunye nokusetyenziswa kwe-Dianabol powder. Ngokomzekelo, ukusebenzisa i-methandrostenolone kunye neziphumo zayo akuvumelekanga e-US, e-Australia, naseKhanada, ngaphandle kokuba kubekho umyalelo osemthethweni. Nangona kunjalo, kwamanye amazwe afana neMexico, U-Dianabol powder uthenge Kulula nje ukuthenga iibini zetyhini.
I-D-bol ingaba yisilwanyana esipheleleyo kwimeko yakho, kodwa unokwenza ukuthengwa ngokomthetho kwilayisenisi Umenzi we powder Dianabol. Makhe ndicacise. Ukuba awunayo igunya lomthetho ovela kugqirha, ingqondo yakho iya kukhangela kwiimarike ezimnyama. Ewe, le ntsebenzo inokuba yinto enhle isebenzise umnyango wangasemva, kodwa uya kuhlaselwa ngamachiza amanga, engaqinisekanga, kunye nokubulala.
Nangona kungenangqiqo ukufudukela kwilizwe eliye lasemthethweni ukusetyenziswa kwe-steroids, usenako ibhanki kwiindawo ezithengileyo ze-Dianabol powder online. Ubuncinane, umgangatho ophezulu oqinisekileyo wemveliso oye wakhiqizwa phantsi kweemeko ezingenamthetho kunye nezimo.
I-Dianabol Powder Ukuthengiswa
Abathengisi abahlukahlukeneyo be-intanethi banikela i-anabolic steroids ukuthengiswa. Ekubeni izitolo zaseTshayina zikhe zakhukhula, unokuzulazula ujikeleze u-Dianabol powder waseChina, ngokukodwa ekuthengeni okuninzi. Ukufumana umthengisi onokwethenjelwa, qwalasela umthombo ophezulu, ukuhamba kwemimoya, kunye nokufumaneka kolwazi olufanelekileyo kwiziko elithile.
Amanyathelo okuthengwa kwe-Dianabol powder online:
Yiya ku-https: //www.proanabolics.com/ okanye nayiphi na enye into ethembekileyo ye-Dianabol ifowuni Isitishi.
Cofa kwibar yokukhangela, thayipha "Dianabol," kwaye uphendule le nto
Uya kufakwa ukuba ubhalise i-akhawunti ngokulandelela lula umkhiqizo ngexesha lokuthumela. Nangona kunjalo, ungakhetha ukujonga njengendwendwe.
Nika iinkcukacha zeakhawunti yakho
Qinisekisa umyalelo kwaye ulinde ukuhambisa ngokufanelekileyo emnyango wakho.
Qaphela ukuba intengo ye-Dianabol yefowuni ihluka ukusuka kumthengisi omnye ukuya kwelinye kunye nobungakanani obuthengayo.
Ngangoko unako ukuthenga i-steroid eyenziwe ngokufanelekileyo, unokuthenga izinto eziphathekayo ezahlukileyo uze uze ne-Dianabol powder recipe yakho. Le nkqubo inenzuzo kuba yinto yokonga kwaye ukuguqulwa kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso umthamo ngokuhambelana nomzimba wakho.
Kukho amahlanu okupheka ukuguqulwa kwama-Dianabol powder, ahluke ngokwemixube esebenzayo kunye nemilinganiselo.
Benzyl Utywala (BA)
Isibilini seglasi esinyumba
Isalathisi kunye nefayili yesirinji yinyumba
Makhe siqwalasele kwiinkcukacha zendlela yokwenza iDi Dianabol ekhaya;
D-bol powder 1g 20g okanye 17.86ml 20g okanye 17.86ml 5g okanye 5.6ml 2.5g okanye 2.23ml
Ioli 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Sebenzisa i-oyile ebomvu esikhundleni (31.77ml)
Ngokuqhelekileyo, i-Dbol powder iyakuthandeka, kodwa izithako ezi ngasentla ziya kunciphisa i-flavour.
Indlela Dianabol (D-bol) Imisebenzi
Dianabol powder inqanda imisipha ukuba ingaphuli xa ikhuthaza ukuhlanganiswa kweeprotheni nokwandisa i-nitrogen. Esi sidakamizwa siza kwenza umzimba wakho ugxininise zonke iiprotheni ezidliwayo zibe zizihlunu. Ngombulelo wobomi obuncinane, uya kuqala ukuqaphela ezinye iirejista zenguqu ezintle kwii-7-10 iintsuku.
I-steroid ivuselela ukutya komsebenzisi, amandla kunye nomoya.
I-Dianabol (D-bol) Ihafu-yobomi
I-Dbol ine-half half life of 4 iiyure. Ukuqwalasela ukuba ixesha lifutshane kakhulu, kuya kufuneka udibanise imilinganiselo yonke imihla ukugcina izinga lokuxilongwa kwegazi.
Isikhathi sokuDinga i-Dianabol
I-steroid iya kufumaneka kwiiveki ezintandathu ukususela ekugqibeleni. Ukuba ungumdlali othethekileyo, kufuneka uyeke ukuthatha iDiabbol inyanga ezimbini phambi kovavanyo.
Iziphumo zeDi Dianabol: Ndiza kuzuza ntoni?
I-Anabolic steroids isebenza ngokuguqula iinkqubo ze-catabolic kunye nokwandisa amaprotheni anabolism. Kwabalimi bomzimba, mhlawumbi unako ukuphucula amandla xa usebenza. Nangona u-Dianabol akanako ukukunika i-vascular appearance, kuya kukwenyuka ukunyusa iimisipha zakho kwaye kukukhangele ukugqithisa kunokuba ngaphambili.
Kwimidlalo yokuzivocavoca, i-Dianabol steroid iyona yongezelelo eyongezelelekileyo yokomeleza amandla akho kwaye ikunike amandla okunyamezela ukusebenza okukhulu. Isilwanyana siphuthuma ixesha lokubuyisela kwaye ngexesha elinye liyanciphisa ukukhathala.
IMethandrostenolone Yona myalelo ongcono kakhulu kwizigulane ezinobunzima bokufumana okanye ukugcina ubunzima obuphilileyo. Imveliso inokukwenza ungeze kwii-20 iipounds kwiiveki ezimbalwa.
Ukuphakamisa iiNqanaba zeTesttosterone
Ukuba unobungozi obuphantsi kwe-testosterone, ugqirha wakho unokumisela i-steroids esemthethweni njengeDbol.
Ukwandiswa kwe-nitrojeni kunye nokulungiswa kwezicubu, ngakumbi emva kokuhlanganiswa kwesikhumba, ukuhlinzwa okanye ukutshisa. Ukongezelela, i-Dianabol isetyenziselwa ukunyanga iintlobo ezithile ze-anemia.
I-Dianabol (D-bol) Isisombululo kunye nokusetyenziswa (Ngaba Kukhuselekile ukuthabatha i-Dianabol?)
Umgangatho osezantsi weDbol umda phakathi kwe-15 kunye ne-50mg / imini. Nangona kunjalo, abanye abasebenzisi abanolwazi baya kusebenzisa ubuninzi be-100mg ngosuku. Into ebaluleke kakhulu ukuba uqaphele kukuba ukunyuka kwamayeza e-steroids kuya kuba nefuthe kwi-blood pressure yakho.
Abasetyhini kunye ne-newbies akufanele bathathe into engaphezu kwe-15mg. Kwabadlali beentombi, i-dose yemihla ngemihla i-30mg. Naliphi na inani eliphakamileyo kunokuba lukhokelela ekunyuseni kwiimpawu zesini zesini kunye nezinye iziphumo zecala ezingenakunyuswa.
I-Dbol ine-half-life-life short, ngoko ke, imfuneko yokwahlula i-2 - 3 amaxesha ngosuku. Kucetyiswa ukuba uthathe izidakamizwa malunga namaxesha okutya ukuze unciphise iziphumo eziqhelekileyo ezifana nezicabangela. Enye indlela eqinisekileyo yokwandisa ukufumaneka kwe-Dianabol kukubandakanya iziqhamo zokuvuna.
I-Dbol yayiyi-anabolic yokuqala ye-steroid enokuthi ithathwe ngomlomo. Nangona le nkunkuma ifumaneka ngokuqhelekileyo kwaye ithathwe njengetethebhulethi, unokuyilawula ngokusebenzisa iinjongo zeesram. Ngenxa yeziphumo ezibalaseleyo, kufuneka uvumelane ne-Dianabol stack ngokusebenzisa ezinye i-steroids ezifana ne-Durabolin, i-testosterone, i-Primobolan, okanye i-trenbolone.
Umjikelezo oqhelekileyo we-Dianabol uhlala phakathi kweeveki ezine neyesithandathu kunye ne dose efikelela kwi-30-50mg. Ngexesha, qiniseka ukuba ubeka i-steroid nge-dose yemihla ngemihla yekhadiarine kunye ne-N2 ukulinda ukulimala kwesibindi. I-Aromasin kufuneka ifike kwakhona ukuze inqande i-aromatization, eyona nto ijongene nesakhiwo se-estrogen kunye nokugcinwa kwamanzi.
Iziphumo ze-Dianabol zivame ukubonakala kwiveki yokuqala yokuyithatha. Nasi uqikelelo malunga nokuba bunzima bunjani obungayifumana kumjikelezo opheleleyo;
Ixesha (iiveki) IMisa (iipounds)
Ekupheleni kweiveki ezintandathu, kuyimfuneko ukuqwalasela unyango lwe-post-cycle ukuze ugweme ukunyanzelwa kwehommone kwiingqungquthela zokuguquka. Kwiimeko ezininzi, umjikelo uya kunciphisa amanqanaba e testosterone. Ngoko ke, unomsebenzi wokuqinisekisa ukuba izinga libuyela kwizinto eziqhelekileyo hleze ulahlekelwe ubunzima bomzimba obuthileyo. Ulwaphulo luhlala kwiiveki ezine.
I-Dianabol (D-bol) Iimiphumo zangasese: Indlela yokuPhepha iimpembelelo ezingezantsi
I-Dianabol steroid inenzuzo kuphela xa uyisebenzisayo ngokucokisekileyo xa uqwalasela ingqwalasela kunye neengozi ezibandakanyekayo. Xa ukwandisa umyinge, iphakame amathuba okuba nemiphumo emibi kakhulu.
Ukugcinwa kwamanzi okanye ukucima
Ukunciphisa i-pituitary gland
Ukukhula kweenwele ezingavamile
Ukunyanzelisa okanye ukuziphatha kwezesondo kwiimfazana ezinjengezikhwebu ezivakalayo, ukukhula okungavamile kweenwele, okanye ukwandiswa kwe-clitoris.
Ukwandiswa kwe-cholesterol engalunganga ye-LDL kunye nokuncipha kwi-cholesterol enhle ye-HDL
Indlela yokugwema nokulawula i-Dianabol Side Effects
Sebenzisa i-aromatase inhibitor okanye i-anti-estrogen
I-Dbol inomdla wokunciphisa i-estrogen. Xa kuninzi le hormone emzimbeni, iziphumo kukugcinwa kwamanzi, ukuqhaqhaqhaqha, ukungabikho komntwana, ukungabikho komzimba, okanye ukuxinezeleka.
Iindaba ezilungileyo kukuba unokusebenzisa i-aromatase inhibitor ukuvimba ukuguqulwa kwe-dbol kwi-estrogen. Ezinye izibonelo ziquka i-letrozole, i-Aromasin, ne-Arimidex. Qinisekisa ukuba uthabathe ezi zongezelelo ngexesha lomjikelezo we-Dianabol kunye neyonyango yokuhamba kwithuba.
Izongezelelo zesibindi seMpilo
Ukuncedisa okulungileyo kukunciphisa ubuthi besibindi ngokunciphisa umonakalo we-oxidative. Ukuba iqulethe ubisi, i-NAC, i-TUDCA, phakathi kwezinye izithako ezicebileyo, oko kuthetha ukuba kuhambelana nelo mthetho.
Kufuneka uthathe i-Dianabol ngokubambisana namaminerali okuphucula ama-cholesterol. Ezinye zezi zongezo ziquka imvubelo ebomvu irayisi, ioli yeentlanzi, i-niacin, okanye i-enzyme co-Q10.
Thatha i testosterone
Ngokuqhelekileyo, inani le-testosterone eliveliswa ngumzimba aliyi kuba lanele ngexesha lomjikelezo weDbol. Ukuba izinga lihamba phantsi, inkqubo yokwakha imisipha iya kugcina. Ngoko ke, ukunyathela ezinye izongezelo ze testosterone kunye no-Dianabol kuya kukunceda ufezekise injongo yakho.
Khangela ukutya kwakho
Thatha ukutya okunotyebi kwi-omega e-fatty acids kunye namaprotheni anempilo. Ukutya okunamafutha aphezulu kukubangela obuninzi bokugcinwa kwamanzi, ngoko ke ukwanda kwinqanaba lexinzelelo legazi.
Thatha amanani amancinci alawulwayo
Abaqalayo akufanele kudlule iqondo le-20mg / ngosuku. Nangona abanye abaqulunqa umzimba bebungozi bangena kwi-100mg ye-steroid, umkhuba awukhuselekanga. Ukuba kufuneka ukwandise ubungakanani, i-50mg ilungile. Umlinganiselo ophezulu uhambelana nemiphumo emibi efana nokuphakama kwegazi.
Qaphela ukuba umjikelezo we-Dianabol kufuneka uhlale phakathi kweeveki ezintandathu kunye nesibhozo.
Abantwana, abaselula, okanye nabancinane kuneminyaka eyi-30
Kubantwana, ukuthatha i-Dianabol kuyakuphazamisa ukukhula komzimba kunye nophuhliso lwezesondo.
I-steroid ingakhokelela ekungabikho komntwana
Izigulane zomhlaza zesifo sebele
IMali enkulu yeMali
Uza kuqala ukuqaphela imiphumo ngokukhawuleza uqale isilinganisi. Awudingi ukuthelekisa u-Dianabol ngaphambi nangemva kwezithombe ukuphawula umahluko. Emva kweveki yokuqala, umzimba wakho uza kubonakala ugcwele, kwaye uza kuzuza inzuzo enkulu.
Ngexa usebenzisa kwi-gym, uya kuba namandla okwaneleyo ukwenza umsebenzi okhuselekileyo okanye uphakamise izisindo ezinzima. Ekupheleni komjikelo, uza kufumana into ecaleni kwe-20lbs.
Ikhuthaza ukuveliswa kweHummoni yeHormone
Esi sidakamizwa siphakathi kwezimbalwa steroids zomthetho ezikhuthaza ukwanda kwehomoni. Ukuba udibanisa isitaki se-Dianabol ngokutya okunempilo kunye nokusebenza rhoqo, i-steroid isebenza ngomlingo. Nangona ufumana ubuninzi obunengqiqo, umzimba wakho uyancipha kakhulu.
Uninzi lwe-steroids oluthengiswayo aluyi-injection. Nangona kunjalo, i-Dianabol isetyenziswe ngomlomo ngeepilisi, iipilisi, iifomsules, okanye kwifom ye-liquide. Ungenza kwakhona iresiphi yakho ye-Dianabol powder kwaye wenze ngokwezifiso umyinge.
Imiphumo echaphazelekayo yecala yegazi iphezulu yexinzelelo lwegazi, umonakalo wesibindi kunye ne-gynecomastia. Inyaniso yokuba isifuba sakho siba yinto engaqondakaliyo epheleleyo ngaphantsi kweveki kunokubangela ukukhuseleka. Ungakwazi ukulawula yonke imiphumo emibi ngokujonga ukuziphatha kwakho kwaye ulandele imiyalelo, kodwa i-gynecomastia ayinakulawula.
Ezinye iimpembelelo ezenza izixhobo zomzimba zikhuphe le myeza ziyizakhono zokungabikho komntwana, iingxaki zentliziyo kunye nomonakalo wesibindi.
Xa ufika ukuva malunga ne-anabolic steroids, imibuzo emininzi ngokuqinisekileyo iya kubaleka ngqondweni wakho. "UNgaba i-Dianabol yomthetho?","Ngaba ndingayifumana umthamo ngaphandle komyalelo osemthethweni?","Yayiphi na i-steroids?"Kunye nemibuzo efanayo. Inqaku elingenhla linemibuzo yonke ozama ukuyifumana.
Dbol ukuthengiswa yayisasazeka phakathi kwe1960 kunye nexesha le-1970 steroids yomzimba. Nangona kunjalo, iziphumo zalo zenza ukuba i-FDA ibekwe njengento yeklasi ye-III kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwayo. EUnited States, i-Dianabol iyatholakala kuphela ngomyalelo.
I-10 ye-testosterone ester ephezulu: yintoni efanelekileyo kuwe? Uhlolo lwe-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)